Instagram Stories အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 13, 2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 2, 2020 Douglas Karr
Instagram ရှိတယ် နေ့စဉ်အသုံးပြုသူသန်း ၅၀၀ အထူးသဖြင့်သင့်ကုမ္ပဏီမှချမှတ်သည့်အခါ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မယုံနိုင်စရာအလားအလာရှိသည် Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများ အင်္ဂါရပ်။ မင်းသိလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ 20% ပုံပြင်၏ရလဒ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိ? အမှန်မှာ၊ လူကြိုက်များသောဇာတ်လမ်းများ၏ ၃၃% ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတင်ခဲ့သည်။
Instagram Story ဆိုတာဘာလဲ။
Instagram ပုံပြင်များကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမြင်အာရုံမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည် အကွောငျးအရာ သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာမှာရုပ်ပုံတွေနဲ့ဗွီဒီယိုတွေပေါင်းစပ်ထားတယ်။
Instagram Stories အကြောင်းအချက်အလက်များ
Instagram ပုံပြင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ ၁၅ စက္ကန့်စီ
Instagram Stories တွေမပျောက်ခင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ သူတို့က ၂၄ နာရီပဲကြည့်လို့ရတယ်။
Instagram Stories များကိုအများပိုင်ဖြစ်ပါသလား။ သင်၏ပရိုဖိုင်းအတွက်သင်သတ်မှတ်ထားသောခွင့်ပြုချက်ကိုသူတို့လိုက်နာသည်။
Instagram Stories အတွက်ဘယ်လိုဗီဒီယိုတင်လို့ရမလဲ။ MP4 အမျိုးအစား H.264 Codec & AAC အသံ၊ ၃၅၀၀ kbps ဗီဒီယိုနှုန်း၊ 3,500fps frame rate သို့မဟုတ်အောက်၊ အကျယ် 30px နှင့်အများဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 1080mb ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်ပေါင်းစပ်မှုများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် စည်သူလွင် သင့်ရဲ့ Instagram Story ၌တည်၏။
Instagram Story အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်များ
ဒီကနေအသေးစိတ် infographic Headway မြို့တော် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရေးရုံသာမက Instagram ၏မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်သင့်အားလမ်းလျှောက်သည်။ အောင်မြင်မှုအတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
တစ် ဦး စည်းလုံးစီစဉ်ထားသည် ဗျူဟာ သင်လိုချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးဖို့သင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးရဖို့။
တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ အချိန် သင့်ရဲ့နောက်လိုက်စေ့စပ်နေကြတယ်ဘယ်မှာ။
လုပ်ပါ သက်ရောက်မှု ပထမ ၄ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသင့်ရဲ့ကြည့်ရှုသူသည်ဇာတ်လမ်းရဲ့ကျန်အပိုင်းကိုဆက်လက်တည်ရှိနေမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးပါ ဒေါင်လိုက် - ပရိသတ်ကဒါကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ။
အသုံး ပထဝီ ဒေသဆိုင်ရာပစ်မှတ်ထားမှုနှင့် ၇၉% ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးလေးဖန်တီးပါ မြှား ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုလိုက်ရန်အပေါ်ကိုပွတ်ဆွဲရန်
ပါဝင်သည်အာရုံစူးစိုက် hashtags ကို ဒါဆိုမင်းရဲ့ပုံပြင်တွေကိုပုံပြင်ကွင်းမှာထည့်သွင်းထားတယ်။
လိုမျိုးအက်ပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါ CutStory ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲဖို့။
သင်၏ပုံပြင်ကိုအစိုင်အခဲဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ call-To-action ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအားပေးဖို့။
ပြင်ပမှရယူရန်စဉ်းစားပါ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု မင်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရိုက်ကူးဖို့ဆိုရင်ဒီဟာက ၂၀% နီးပါးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးပွားစေတယ်။
အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်တည်ဆောက်ရန်ပုံပြင်များ၏အလွတ်သဘောသဘာဝကိုအသုံးပြုပါ အဆိုပါနောက်ကွယ်မှ သင့်လုပ်ငန်းကိုကြည့်ပါ
ပုံပြင်ကြည့်ရှုပေးပါ ထူးခြားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှု သူတို့ကိုသစ္စာစောင့်သိမှုအတွက်ဆုချနိုင်သည်။
တစ် ဦး တွန်းအားပေးရန်ပုံပြင်များကိုသုံးပါ မဲပေးပှဲ သင်၏မဲဆန္ဒရှင်များအားမဲဆန္ဒရှင်များအားမဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်စတစ်ကာများ သုံး၍ ထုတ်ပါ။ တိုတိုနှင့်ချိုမြိန်စွာထားပါ၊ သင့်တွင်စာလုံး ၂၇ လုံးသာရှိသည်။
Instagram Stories သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်စတင်ပြီးကတည်းကသိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့ပြီး၎င်းကိုအပြည့်အဝမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လိမ့်မည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင်၏ပုံပြင်ကိုယခုစတင်ပြောပြပါ။ Headway Capital မှ Nivine
ဤတွင်အလွန်ကြီးစွာသော infographic ပါပဲ Instagram ပုံပြင်များအတွက်အသေးစားစီးပွားရေးလမ်းညွှန်:
Tags: instagraminstagram ပုံပြင်များစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများပုံပြင်များ